धेरैपछि अन्जु पन्तका बारेमा मिडियामा पढ्न पाइयो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
देशको राजधानीको अवस्था यस्तो छ (गजुरियल विश्लेषण : खाल्डो पुराण) । अझ राजधानीबाहिरको अवस्था कस्तो होला ?
- नेत्र शाह
जीवन स–साना कुरामा अड्किरहेको हुन्छ (युवा मन : झिनामसिना कुरा) । सानो कुरामा चुक्दा नै कतिपय सम्बन्ध अलग हुन्छन् ।
- ममता पाण्डे
अरूलाई खुसी दिएरै नेपथ्य ब्यान्ड र अमृत गुरुङ सफल भएका हुन् (अन्तर्वार्ता : मानिसहरूको खुसीमा खुसी हुन्छु) देश तथा विदेशमा नेपथ्य ब्यान्डका सांगीतिक कार्यक्रम फैलँदै जाऊन् ।
- रुक्मिणी आचार्य
यस्तो नियम ल्याउन आवश्यक थियो (फ्रन्टपेज : छोटा स्कर्ट र बाइकमा बन्देज) । विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनमा राख्न जरुरी छ । बढी स्वतन्त्रताले उनीहरूको भविष्य बिगार्छ ।
- इशु शर्मा
परी मेकर्स पढेपछि नेपाली युवाहरू कम छैनन् (साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी : परी मेकर्स) भन्ने विश्वास अझ बलियो भएर आयो । हामीले नेपाली युवाहरूलाई हौसला दिनुपर्छ । उनीहरूको कामले मिडियामा बढीभन्दा बढी स्थान पाओस् ।
- नन्दलाल जोशी
कृषि विज्ञ सुरेन गौतमलाई गायनमा पनि सफलता मिलोस् (विमोचन/प्रिमियर : कृषि विज्ञको गीत)— शुभकामना ।
अमेरिका बसेर नेपाली गीत–संगीतमा सक्रिय दिकीको कथा पढेर खुसी लाग्यो (चर्चामा : फरक शैलीका गीत गाउने दिकी) । परदेशमा रहनेहरूले यसरी नै स्वदेशका लागि केही न केही गर्न सक्छन् ।
- नीलकण्ठ पौडेल
सबै प्रतियोगीलाई बधाई (फिल्मी डायरी : चलचित्र प्रतियोगितामा छनौट) । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालले जित हात पारोस्— शुभकामना ।
- अनु ढकाल
अझै पनि सेलिब्रेटीहरूले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् (प्रसंग : सञ्जालको जालमा सेलिब्रेटी) । यसलाई सामाजिक काममा प्रयोग गर्न पाए धेरैको भलाइ हुने थियो ।
- सबिना मल्ल
संगत नगरी कसैका बारेमा वास्तविक तथ्य थाहा पाउन सकिँदैन (मुक्त आकाश : संगत गुनाको फल) । एकचोटि देखेकै वा बोलेकै भरमा मानिसको मूल्यांकन हुँदैन ।
मिस एसिया नेपाल–२०१७ को उपाधि जितेकोमा उकुशा गिरीलाई बधाई छ (उकुशा भइन् मिस एसिया नेपाल) श्रीलंकामा हुने प्रतियोगितामा नेपालको नाम चम्काउनुहोला ।
- सन्देश लुइँटेल
यो खबर पढेर खुसी लाग्यो (मिस युकेमा माल्भिक सुब्बा) । माल्भिका सुब्बाजीलाई शुभकामना छ ।
नेपालमा पर्यटनको सम्भावना निकै राम्रो छ (पर्यटन : हुपी ल्यान्ड एम्युजमेन्ट एन्ड वाटर पार्क) । अन्य स्थानहरूलाई पनि यसैगरी स्थान दिनुहोला ।
- मीनराज शर्मा
किसानका छोरा हुन् च्याउ उमार्न जानेका छन् (यात्रा सन्दर्भ : चिन्ने हो यी ‘धनपति’ लाई ?) । पूरै लेखमा यो सन्दर्भ दामी लाग्यो ।
- सुरेन्द्र सुगम भट्ट
परी मेकर्स बनाउने युवाहरूलाई सलाम छ (साइन्स एन्ट टेक्नो : परी मेकर्स) । तपाईंहरूबाट अझै यस्तै आविष्कारको अपेक्षा गरेको छु ।
- खगेन्द्र प्रधान
उदयपुर लिटिल आइकन जित्न सफल भएकोमा सभ्यता कार्कीलाई बधाई (उदयपुर लिटिल आइकन) । अन्य प्रतियोगिताहरू पनि जित्न सफल हुनुहोस्– शुभकामना ।
- भूमिका निरौला
टिकटको मूल्य बढी भयो (पर्यटन : हुपी ल्यान्ड एम्युजमेन्ट एन्ड वाटर पार्क) । सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर अलि सस्तो बनाए हुन्छ नि !
- सुशील सलमान
गायिका दिकी उक्याबका बारेमा पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो (चर्चामा : फरक शैलीका गीत गाउन दिकी) । परदेशमा बसेर पनि नेपाली गीत, संगीतलाई निरन्तरता दिनु खुसीको कुरा हो ।
- सूर्य विश्वकर्मा
धेरैपछि अन्जु पन्तका बारेमा मिडियामा पढ्न पाइयो (एकल गायनमा अन्जु पन्त) । गायनबाट कतै ओझेलमा पो परिन् कि भन्ने लागेको थियो ।
- लक्ष्मण बिके